Ireo fomba itarihan'ny Fanahy antsika
« Ny ondriko mihaino ny feoko, ary Izaho mahalala azy, ary izy manaraka Ahy ». Jao. 10:27
Manantena ireo rehetra izay milaza ny tenany ho miaramilany Jesôsy hanao ny fanompoana ho Azy. Maniry ny hahafantaranao ilay fahavalo sy hanoheranao azy Izy, tsy hatoky azy ka hamadika ny fahatokiana masina. Nametraka anao amin'ny toerana avo sy ambony, ary hanana mandrakariva fahamendrehana hanao ny asany ny Tompo. Raha tsy manana ireo toetoetra ireo ianao, dia ianao irery ihany no tompon'andraikitra amin'izany.
Misy fomba telo no anambaran'ny Tompo ny sitrapony amintsika, hitarihany antsika ary hahafahantsika hitarika ny hafa. Fomba ahoana no hanavahantsika ny feony amin'ny an'ny vahiny? Fomba ahoana no hanavahantsika izany amin'ny feon'ny mpiandry ondry tsy marina? Manambara ny sitrapony amintsika ao amin'ny Teniny, dia ny Soratra Masina, Andriamanitra. Hita amin'ny asa eo amin'ny fomba fitantanany koa ny feony; ary ho fantatra izany raha tsy misaraka Aminy ny fanahintsika amin'ny fizorantsika eo amin'ny lalantsika manokana, fanaovana ny sitrapontsika ary fanarahana ireo fironan'ny fo tsy masina ka lasa hifangaro ireo fahatsapana ary tsy hay ny manavaka ireo zavatra momba nymandrakizay,mamitaka ny feon'i Satana ary ekena ho toy ny feon'Andriamanitra izany.
Ny fomba hafa andrenesana ny feon'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny feon'ny Fanahiny Masina miteny amin'ny fo izay hovolavolaina eo amin'ny lafiny toetra. Raha misalasala amin'ny lohahevitra iray ianao, dia tsy maintsy manontany ny Soratra Masina aloha. Raha tena nanomboka marina ny fiainam-pinoana ianao, efa nanolotra ny tenanao ho an'Andriamanitra mba ho Azy tanteraka, ary nandray anao hovolavolaina sy namboariny araka ny sitrapony Izy, dia ho fanaka ho fanomezam-boninahitra ianao. Tokony hanana fanirina lalina mba hanaiky hovolavolain'ny tanany ianao ary hanaiky izay rehetra mety hitondrany anao. Noho izany dia mahatoky Azy ianao mba hanatanteraka ny fikasàny sady miara-miasa Aminy mba hahatanteraka ny famonjena anao amintahotra sy hovitra. Hahita fahasahiranana ety ianao ranadahy, satria tsy nianatra tamin'ny alalan'ny fanandramana hahafantatra ny feon'ny Mpiandry tsara ianao, ary mametraka anao, eo amin'ny fisalasalana sy fahaverezana izany. Tokony ho afaka hanavaka ny feony ianao.